China Carbonated onunu na soda ọ drinkụ prodụ igwe nrụpụta ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | JUMP
Carbonated onunu na soda a drinkụ prodution igwe
Carbonated ihe ọ andụ refersụ na soda ọ drinkụ prodụ prodution igwe na-ezo aka onunu jupụtara carbon dioxide n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ.
Ihe ọ drinksụbonụ Carbonated, ihe ndị bụ isi gụnyere: mmiri carbonated, acid citric na ihe ndị ọzọ acidic, shuga, ngwa nri, ụfọdụ nwere caffeine, agba artificial, wdg Na mgbakwunye na carbohydrates nwere ike ịgbakwunye ume na ahụ mmadụ, ihe ọ drinksụ "ụ "carbonated" nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị nri. Ihe ndi mmadu bu: coke, Sprite na soda.
Igwe ihe ọ drinkụ drinkụ carbon ma ọ bụ igwe Coke. Ọ bụ igwe na akụrụngwa maka imepụta ihe ọ carbonụ carbonụ carbonated. Igwe ihe ọbonụverageụ na-a includesụ ihe ọ includesụ includesụ na-agụnye mgbapụta mmiri syrup na nkwonkwo, otu ndị na-enye nrụgide, piproproprop na ngwa mgbakwunye, mmiri mmiri, carbon dioxide cylinder, wdg. A na-eme ha site na ijuputa carbon dioxide n'ime mmiri ọ drinksụ liquidụ. Akụkụ ndị bụ isi bụ shuga, ink, ngwa nri, wdg.
Enwere ike ịkekọrịta usoro mmepụta nke ihe ọ carbonụ carbonụ carbonated n'ime otu usoro ndochi na ụzọ ndochi abụọ.
Carbonated-averageụ ihe ọ sodaụutionụ na soda na-a machineụ ihe ọutionụ prodụ na-emepụta ihe otu oge
A makwaara ya dị ka usoro mkpuchi zuru ezu, usoro ndozi ngwaahịa ma ọ bụ usoro ngwakọta tupu. A na-agbanye sirop na-esi ísì ụtọ na mmiri n'ime ihe ọ beụ beụ na-a carbonụ ihe ọ carbonụ toụ carbonated dị ka akụkụ ụfọdụ tupu oge eruo, wee jụzie mgbe agwakọtara ha ọnụ, mgbe ahụ, carbonated ahụ wee tinye ya n'ime akpa ahụ.
Mmiri ọ→ụ→ụ treatment ọgwụgwọ mmiri → jụrụ water mmiri gas na-agwakọta ← carbon dioxide
Sirop → agwakọta → agwakọta → njuputa → akara akara nyocha → ngwaahịa
Akpa → nhicha → nyocha
PET karama ihe ọ beụ beụ na-averageụ ihe ọverageụ carbonụ na-eme ka nkà na ụzụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ iji ghọta ịsa akpaka akpaka, njuju, ntinye na usoro ndị ọzọ, na nnukwu akpaaka; ọ kwadebere ya na njikwa nrụgide CO2 ziri ezi na njikwa njikwa ọkwa mmiri mmiri; a kwadebere ya ọtụtụ ngwaọrụ mkpuchi dị ka karama jam, karama na-efu, okpu na-efu ma bufee ya iji hụ na ngwaahịa dị mma; ọ nwere uru dị elu nke ntụkwasị obi, arụmọrụ dị elu na ịrụ ọrụ dị mfe. Akụkụ ndị a na-emetụ na akụrụngwa nke ihe na-eme ka ihe ọ beụverageụ na-egbu ihe na carbon bụ nke igwe anaghị agba nchara, nke dị ọcha ma dịkwa mfe ihicha.
Nke gara aga: Akụrụngwa akụrụngwa na usoro mmepụta
Osote: Igwe mmiri dị ọcha
Mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn
Anyụ Ihe ọiceụiceụ Watermelon
Akụrụngwa akụrụngwa na usoro mmepụta